Russian temdzabu linomlando omude. Omunye okuqinisekile ingena esikhundleni kwelinye izwe isikhathi esingaphezu kwesisodwa nitinikele ukuba angabe esaba khona, kodwa abantu bendawo akazange avumele ukungasabeli kahle ukulahleka yifa labo. Ngemva kokudabula yonke le nkathazo kulo ikhanda lakhe waliphakamisa, manje isizwe elichumayo Russian akalilahlile ubukhulu yayo yangaphambili. Njalo senzakalo - ukuzalwa kwengane, umshado noma ukuvuna - ubephelezelwa iculo onamileyo nangemidanso. Abaculi sasishintsha njalo, kodwa umbhalo alilitshelwe wadlula ezizukulwaneni ngezizukulwane. uhlobo Gayest ubhekwa Russian Folk ditties - iDemo imvumelwano iculo ephelezelwa dancing nokudlala izinsimbi zomculo.
ngomlomo ka isizwe ngasinye imelelwa ehlukahlukene. Nakuba engakwazanga ukuwaphendula abalobi imfundo iculo, tinganekwane izindaba kweqiniso, temdzabu lalimelela ezingqubuzana kakhulu kuyifilosofi - ekulweni okuhle nokubi. Khanyisa ubelokhu ezahlala winner, echaza le bokubanga sokulindela okuhle temdzabu.
Folk izincwadi kuhlukile yimvelo nokuqukethwe wokuphila, ngokuyisisekelo uhlelo ngemibono futhi kwezobuciko futhi isimiso sendalo kanye khona. It is art adalwe bakule ndawo abavamile wahlala for ezahlukene zabantu. Russian Folk songs futhi couplets libonise izinkinga ngokucindezela kanye nezimpilo zingabantu besilisa nabesifazane abavamile, ngakho okuqukethwe kwabo ngemibono kanye thematic njalo efanele. Akumangalisi ukuthi rhymed ingoma ngokuvamile sung hhayi kuphela abantu bendawo, kodwa futhi abantu abahlala emadolobheni, kanye ezithakazelisayo ikakhulukazi ukubukela ukuvela egwema ngemisebenzi yezimbongi ezidumile ezifana Sergei Yesenin, u-Alexander Blok, uVladimir Vysotsky, Bulat Okudzhava.
Phakathi kwabo bonke labo izinhlobo zamasiko ditty iyona omncane. Njengoba kwavela yekhulu nesishiyagalolunye, izingoma iDemo imvumelwano yathi chithi saka ngesikhathi ukusungulwa kwamandla Soviet. ososayensi Rusovedam ahlulekile ukuthola ukuthi ngubani kwaba nombhali Folk song kuqala, ngakho kuyiqiniso ukusho ukuthi esenze imizamo yonke abantu Russian. Isizathu sokuba imigqa alo yevesi zingakhiqiza emzaneni izenzakalo, isosha ebuya phambi, uthando nakho. Ngenxa yokuthi abathwali babe abangafundile amadoda dolobhana futhi abesifazane, kwakukhona Russian Folk ditties afunge ukuthi endaweni ngayinye nabizelwa ngetindlela letehlukene: pripevki, korotelki, skazuhi, korotushki, sobirushki, turntables. Naphezu isimo satirical imigca olusankondlo, abalobi, kwakungekho muntu omonile, ngisho noma fundile umfanekiso iphupho yezenzo zabo nezenzo.
Ngokungafani epics futhi iculo zomlando, lapho wayekhona ngesikhathi esifushane, ukushintsha okuqukethwe futhi kwathatha nezinye izinhlobo ditties uhlobo njalo efanele ngenxa ukubunjwa yayo nokuqukethwe thematic. Ngo imvumelwano sika iculo ezinganekwane ezingokwesayensi ngokuvamile babonisa yokusabela kuya izenzakalo futhi esikhathini umphakathi nemizana ukuphila noma nomuntu ngamunye. Protagonists nabadubuli zazivame kakhulu abafana namantombazane. izihloko yamanje othandweni chastushkas livele libe nombala entsha futhi akubi umuzwa omkhulu, iqhinga, lapho ngezinye izikhathi kwakudingeka bekloloda.
Intombi bangilahla, futhi,
Kungakhathaliseki uhlobo - siyajabulisa noma edumele - Russian Folk ditties babe umbala omuhle futhi umdanso eyenziwa amantombazane noma abafana umdlalo obunobunye. Umbhalo nabadlali angase ukusho ukukhuluma ngemizwa yabo imfihlo, thintana izicelo izilaleli noma ethuka.
Ukubuka umsuka wenkulumo ethi
ababengaphambi Pripevok babedlala Folk songs, ngokuthi "njalo". I wasebenzisa okokuqala ngangingalazi leli gama, umbhali Glebom Ivanovichem Uspenskim ngasekupheleni yekhulu nesishiyagalolunye. Academician Aleksey Aleksandrovich Shahmatov, owayefundelwa temdzabu, zahumusha ditties Folk Russian. Umbhalo iculo yayivamise ukuba liphinyiselwe ngokushesha, ngokunembile futhi ukufanisa isigqi umdanso noma insimbi yomculo. Nakhu okwenzeka kithi egameni owaziwa "ditty" kusukela "ingxenye" sesenzo.
Enye inguqulo wukuthi ibizo lisuselwa isandiso "ngokuvamile" ngoba mazwi khuluma imvamisa eliphezulu. Pripevki ababengazange bazicabangele uhlobo agcwele kwezobuciko, nakuba esikhathini sethu quatrains luthathe indawo okuphawulekayo kazwelonke ingoma isiko.
Yenza konke okuningi!
Namuhla Russian Folk ditties - uhlobo intandokazi iyona abantu bendawo hhayi kuphela, kodwa futhi ku kwemiphakathi yasemadolobheni. Abadlali bokuqala babefana zinsizwa, kodwa iculo ekugcineni ezihlekisayo kangaka uyakuthanda ogogo nezingane, ukuthi maduze sebeqala ukuhalalisa, abantu bazo zonke izizukulwane. Ngaphansi merry tune inkositini neze ubani angahlela imilenze abangalawuleki, isiqalo abasha kanjalo nabadala ukuba umdanso kanye saqala ukuhlabelela. Russian Folk ditties izingane ehlaselwe ezahlukene umbuthano emincane labo futhi ube Ukwakheka lula. Iculwa izingoma iholidi kancane esimweni esikhululekile, futhi ngokuvamile yasungulwa on the fly.
Mina ingane Sveta,
Ngiyakuthanda ukudansa lapha
Futhi Ngiyakuthanda ukuba baphumule.
Ngiyaye ngithi ngizobuye ngiwenze engadini,
Ngizoba lapha ukudansa
Futhi izihlahla waphuzisa.
Couplets eklanyelwe ehlabelela kanye umdanso abalingani, ngakho ukwakheka kwakhiwe ngesimo inkhulumomphendvulwano. Ngokuvamile ahlelwe emzaneni imincintiswano winner, ngubani uzokwazi beveza okungaphezu nje imvumelwano iculo.
I inkositini - kumnandi!
Isici esiyinhloko temdzabu - iwukuxuba - kuhilela izinhlobo ezihlukahlukene art. Ngo temdzabu Russian uye kuhlanganiswe ngempumelelo izwi, umculo kanye yaseshashalazini. Lolusiko sizalwa nawo imvumelwano, ngakho iculo sung sihambisana we balalaika kanye namanye amathuluzi. Ngakho ukuzijabulisa baba perky kanye nentokozo, kuyilapho bona wazama ukudansa amashuni ka Harmonics izinyawo.
Mina wasina futhi idansa
zonke wesula galoshes.
Umama sivela esitaladini
Russian Folk ditties - ezihlekisayo noma edumele - angase abulawe ngaphansi izinsimbi ezivamile: balalaika, isigubhu, uphondo, nezinkezo ngokhuni, nezinsimbi.
Inkinga kulondolozwe temdzabu Russian
Asikho isizwe uzokwazi ukwenza ukhona ngaphandle isiko lasendulo. Namuhla, amafomu ezinkulu nezincane temdzabu zigcinwa emadolobheni amancane, lapho, njengoba amakhulu ambalwa eminyaka edlule, wahlela amaholide collective, sung Folk songs futhi Russian Folk ditties. intsha Urban mancane nentshisekelo temdzabu, bese abantu bendawo ababengazi bathuthela emadolobheni, ngakho ezinye izinhlobo ingozi zinyamalale ngokuphelele. amaqembu nokuningi kwakhiwa endaweni Russia, ukuthatha njengesisekelo zokudala Folk songs. imibhalo emisha abhalwe, ubudala ukhohlwe, futhi kubo nje umculo ukudlala futhi inkanuko umbala wombhalo. Umsebenzi oyinhloko izingane - ukulondoloza zonke izinhlobo lwamazwi baphathe ngokusebenzisa iminyaka sondo kubantu Emakhulwini eminyaka alandela wayazi ngomlando wabantu bakhe.
I-Hydrogel ibhekene nesisindo kusuka kumibimbi: ukubuyekezwa